2008: Gore reMicro | Martech Zone
2008: Gore reMicro
Chitatu, December 26, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iri raive gore rinonakidza muinternet tekinoroji. Kana iwe ukazvitarisa kubva kune zviuru gumi zvetsoka maonero, vanhu vachiri kunyatso kupisa nzira yekuti ungashandise sei ichi chitsva svikiro, iyo Internet. Zvichida zviri pachena asi ini ndinotenda gore ra10,000 ndiro gore chairo rinoshandiswa nemaitiro Micro.
Iko kushanduka kwesocial webhu (Webhu 2.0) parizvino iri kufamba nekukurumidza ichienda kunharaunda nyowani yakanangwa. Iyo hombe, imwe-inokodzera-mhinduro yese ichave ichichinja kukupa iwe kwakakodzera kubatana kune vanhu chaivo uye izvo zvirimo zvemukati… panguva chaiyo.
Email yadarika iyo yakajairwa kushandiswa kweNewsletters uye iri kuwedzera simba munyika yekutengeserana. Panzvimbo pekupa icho chaicho 'chiitiko' iyo kutumira email iko zvino kwasimudzwa sechikamu chehurongwa hwekushambadzira hwese kuchengetedza vashandisi nekuvachengeta vakabatana kune yavo yekutengesa chitoro, yavo yemagariro network, mablog avakaverenga, nezvimwe.
Email irikuchinjawo, kunyangwe paine kukwana kwe main email vatengi. Email iri kuenda micro… mameseji akakodzera nguva, kuwanda kutonga, uye zvimwe zviitiko zvinotyairwa.
Blogging yaenda Micro ne Twitter, Jaiku naPownce. Kurumidza snippets iyo inogadzira chaiyo hurukuro kubva kune imwe kusvika kune dzakawanda.
Makambani atotanga kushandisa Microblogging, asi isu tichaona kushandiswa kwekutengesa kweMicroblogging muna2008. Tichaonawo mapoka ari nani akakwenenzverwa muMicro-blogging… zvakaita semakamuri ekukurukurirana akashanduka mukushambadzira kweruzhinji makore gumi apfuura.
Masocial Networks ari kusimuka kubva kune monolithic nzira dze Facebook, Nzvimbo yangu, LinkedIn uye Plaxo… Uye famba kune micro social network ye Ning (cherekedza: MudikiIndiana, NavyVets, Mitambo Kushambadzira 2.0, IndyLance vashoma ini ndatanga kana ini ndakabatanidzwa mune!).
Bookmark nzvimbo dzakadai Digg vari kusiiwa kunzvimbo dzakadai Sanganisa - uko iwe kwaunogona kumisikidza Micro Mapoka kujoina. Ini ndinokurudzira munhu wese anoverenga blog yangu kuti andibate kuti ndikoke kuInternet Kushambadzira Boka kuti tigone kugovana zvinongedzo Zvimwe zvinoshandiswa seTruemors zvichaenderera mberi zvichikwiridzwa neakanatswa ekunangisa kugona pane kusarudzwa zvikamu.
Geographic Information Systems pamhepo zviri kuburitswa zvakawandisa kuenda micro. Google, Yahoo, uye Microsoft ramba uchiwedzera dunhu redunhu rekutsvagiswa kweGeographic Google iri kutotsigira KML mune sitemaps, kuzivikanwa nenzvimbo uye kunongedza mawebhusaiti ako!
Vhidhiyo iri kuenda Micro (posvo yakagadziridzwa pamwe nekurudziro kubva pane zvakataurwa naNil paScobleizer). Utterz, Seesmic uye QIK. Vhidhiyo uye nharembozha matekinoroji ari kusangana, zvichigonesa vanhu kurekodha uye kurodha vhidhiyo zviri nyore kwazvo nemhando iri nani!
Software seSevhisi Zvishandiso inoenderera ichimanikidzwa kuti ive inokwenenzvera zvakakwana yekumaka uye kubatanidzwa mune zvimwe zvinoshandiswa kana zvimwe zvigadzirwa. Hapasisina iko kunyorera 'makani' kwakaringana kuti isu titenge nekuisa kumusoro, isu tinofanirwa kuwedzera matekinoroji eCSS kushandura mashandisiro edu kune chero nharaunda. Isu tinofanirwa kuvaka zvikumbiro zvinokwanisa kuchinjiswa kudiki (diki) ruzivo.
Ikoko unayo, fungidziro yangu yegore ra2008 - gore reiyo diki zano uye micro bhizinesi kunyorera. Iko kugona kugadzira se mapoka, enzvimbo enzvimbo anoshandira, micro-yakamisikidzwa SaaS, kana akareruka magariro mapoka achakwenenzverwa zvizere muna 2008. Avo vasingazogadzirise vachakanganikwa.
Tags: 2008bookmarketinggeographic ruzivo masisitimugismap2008 marketingmicroevanhu vezvenhausocial networksoftware sebasa
Tumira Meseji Yezororo kune Mauto!
PageRank: Newton's Giravhiti Dzidziso Yakaiswa
Dec 27, 2007 pa 2: 47 AM
Boka rako reMixx harina kuvhurika kune vanyoreri vako. Ndadzvanya pane yako link kuti ndijoine ndikawana meseji iyi:
“Hoo! Pane chinhu chisina kumira zvakanaka.
Pssst: Hausati wakokwa kuboka rino, saka kwete, haugone kuzviita. Asi bvunzai zvakanaka pamwe vangakutenderai kuti mupinde. Kana kuti ingotangai boka renyu!”
Dec 27, 2007 pa 9: 35 AM
Nehurombo, Mixx haipe 'mapoka akavhurika' (sezvandinogona kutaura!). Kana uchida, shandisa fomu rangu rekuonana uye unditumire email kero yako uye ini ndichakukandira kukoka!
Dec 27, 2007 pa 5: 49 AM
Inonzwika kunge 'mediasnacks' kumativi ese 😉
Dec 27, 2007 pa 10: 33 AM
Kana zvese zvikafamba zvishoma, uye ndinofanira kubvuma kuti zvaunotaura ichokwadi saka sevanhu isu tichave chikamu chehurukuro diki, sekunge iwe uri papati hombe uye uchitaura nevanhu vashanu kana gumi husiku hwese.
Pakupedzisira tichada chaizvo nzira yakanaka yekuziva nezvemapato aya senge munhu wese akamboziva nezve Facebook gore rino.
Imwe yedambudziko chairo randakaona uye kuyedza kufambirana naro gore rino rave shanduko huru uye kuti zvave zvakaoma sei kuenderera mberi. Ndakaona kuti ndinodzidza nezve tekinoroji nyowani kubva kuvanhu vakaita seScoble nekuverenga maRSS feeds muGoogle reader yangu asi zviri nyore kuti tekinoroji huru ishaikwe kunze kwekunge mumwe munhu asiri Arrington atibatsira kuti tirambe tichiona.
Zvita 27, 2007 na12:52 PM
Hey, thanks murume nekutaurwa. Hapana nzira yandaida kuderedza kukosha kwepositi yako iwe unoziva. Iwe uri pamari pachokwadi sekufunga kwangu. Pamwe chinhu chine ruremekedzo chingadai chiri chekutaura pano pekutanga, kunyangwe izvo zvingave zviri "kupinda mukati" pamwe. Ndafara kuverenga post yako. Mufaro.
Zvita 27, 2007 na2:52 PM
Hapana kunetseka, Nil! Wataura chinhu chikuru. Ndakatarisa pavhidhiyo kusvika ndaverenga chirevo chako - uye wanga wakarurama!
Zvita 27, 2007 na3:46 PM
Chimwe chezvinhu zvakagara zvichindifadza mune tekinoroji uye midhiya mitsva kugona kusanganisa zvinhu nekugadzira zvinhu zvitsva, zvinonakidza (Ndine urombo, haigone kufunga nezve izwi riri nani pane iro izvozvi.) asi zvakawanda zveizvi. zvinhu zvinova zvidiki zvekuti vashoma chete vakajekerwa vanotoziva nezvekuvapo kwazvo. Ndiri kunyanya kufunga nezvezvinhu zvakaita se hashtag pa Twitter. Kuti zvese izvi zvinoenda kudiki zvinyatsoita zvinokonzeresa, panofanirwa kuve neimwe mhando yemhando yefoni yemuti wekufambisa nhau kune vanhuwo zvavo nekuti - ngatitarisana nazvo - vashoma vanhu vanotoziva kuti RSS chii, ndoda kunyoresa. kuzvokudya zvose zvinokosha uye zvisefa zvose.
Chekupedzisira, kukakavara kwangu ndekwekuti yakawanda yemikana yekushambadzira iyo vanhu vanoona mumicroblogging uye nharembozha uye zvimwe zvese ndizvo chaizvo mhando dzezvinhu izvo vanhu vakaita seni vachange vachichemera kuti vatize. Ini handisi kupokana nepfungwa yega asi panofanira - uye zvakakosha - kuve pachena, nzira dzakapusa dzekutonga nekudzora izvo zvakaitika kwandiri. Ini ndinofunga chirongwa chakaita seOAuth neOpenID chinoenda kure kure kufambisa rudzi urwu rwechinhu asi ndinofunga kuchine basa rakawanda rinofanira kuitwa kuchengetedza vanhu. Sezvo nyika ichienda diki, nzvimbo iyo vatengesi vari kupinda nechisimba iri kuwedzera munhu. Uye ini handitore zvine mutsa kuti nzvimbo yangu yega yakapindirwa. Kana ndikakupinzai mukati, zvakanaka. Asi kana ndikakukumbira kuti uende, buda kunze kana ndichakuburitsa.
Ndiyo $.02 yangu chete.
Zvita 27, 2007 na5:14 PM
Ndiyo inokwana nickel, Jamie 😉
Ndinofunga wakaroverera zvinhu zviviri… chekutanga kuti tekinoroji iri kushanduka uye shanduko chinhu chakanaka. Yechipiri poindi yaunotaura ndicho chikonzero nei isu tichida mamwe masvikiro akakwenenzverwa. Kana ndine chigadzirwa kana sevhisi yaungade, ungafarire kuziva nezvazvo (mumashoko ako) sezvawandikoka kuti ndipinde.
Kutsvaga tekinoroji inounza chigadzirwa kana sevhisi kune anotarisira ari kutsvaga kana zvinodiwa icho chigadzirwa kana sevhisi ndizvo zvatiri kutevera. Chekupedzisira chandinoda kuita a) kutambisa mari yangu pakushambadzira kusingasvike kumunhu akakodzera uye b) kutsamwa kune vanhu vakaita sewe nekuzviisa kumeso kwako iwe usina kukumbira.
Ndiri kufara nezve shanduko yetekinoroji icharamba ichiunza musika pamwechete! Tinovimba hatitsamwise vanhu vakaita sewe isu tichizvinzwisisa. 🙂
Diki Bhizinesi Kushambadzira
Dec 28, 2007 pa 2: 43 AM
Neruzivo rwese rwunowanikwa pawebhu, tichafanirwa kusefa kuti tikwanise kunzwisisa. Imwe yedzakanakisa nzira dzekusefa ndeye niche kana nemamwe mazwi kugadzira nharaunda diki kana shanduro yeruzivo. Ini ndinobvumirana zvachose nekufungidzira kwako.
Dec 31, 2007 pa 5: 11 AM
Ndinotenda nekuda kwechinyorwa ichi. Ndinobvuma kuti Micro ine simba. Sei? Nokuti zviri nyore kuita. Vanhu havatarisiri kuti iwe uchanyora nyaya yepamusoro ine mavambo akanaka, yepakati nemagumo. Uye zviri nyore kushandisa, zvirinani: 'browser'. Mufaro.
Feb 7, 2008 at 7:36 PM
Ndakashaya kuti pane angandibatsira here. Ndiri kutsvaga iyo hombe yazvino nyaya/s mune tekinoroji ine chekuita nekushambadzira…chero mazano achafarirwa zvakanyanya…cheers!!!